Ronald Koeman Oo Sharraxay Sababtii Uu Ousmane Dembele U – Axadle
Tababare Ronald Koeman ayaa sharraxay sababtii uu kursiga kaydka ugu hayey laacibka reer France ee Ousmane Dembele ciyaartii ay Barcelona xalay 3-0 ku garaacday Celta Vigo.
Ansu Fati ayaa Barcelona u furay gool-dhalinta daqiiqaddii 11aad, waxaase ciyaarta laga saaray Lenglet oo kaadh cas qaatay dhamaadka qaybtii hore, laakiin markii lagu soo laabtay qaybta dambe ayuu Lucas Olaza iska dhaliyey gool, midka saddexaadna waxa u raaciyey Sergi Roberto.
Inkasta oo ay Barcelona ciyaarta ku raaxaysanayaysay, haddana Ousmane Dembele ayaan garoonka lugta soo gelinin oo kaydka ku dhamaystay, waxaanay taasi sii kordhisay hadal-haynta suuqa ku jirta ee sheegaysa in Manchester United ay amaah ku qaadanayso kaddib markii ay ku guul-darraysteen inay lasoo saxeexdaan Jadon Sancho.
Manchester United ayaa waqtigu ku yaryahay, waxaanay haysataa illaa Isniinta inay ku samayso saxeexyo cusub oo ay isku xoojiso, wixii ka dambeeyana waxa xidhmi doona suuqa iibka ciyaartoyda.
Tababare Ronald Koeman ayaa markii ay soo dhamaatay ciyaartii ay Celta Vigo ku garaaceen, waxa la weydiiyey haddii sababta uu u fadhiisiyey Ousmane Dembele ay tahay mid la xidhiidha hubanti la’aanta mustaqbalka laacibkan, waxaanu ku jawaabay: “Bixitaankiisu waa mid u taalla kooxda iyo ciyaartoyga. Laakiin waxa aan ku fikiray in Pedri iyo Trincao ay nagu soo kordhin karayeen difaacis ka wanaagsan inta uu Dembele samayn karayo, taas ayay ahayd sababtii aan iyaga u ciyaarsiiyey.”
Koeman waxa uu amaanay bandhiggii kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Waxa aanu muujinay ciyaar wanaagsan. Waqtigii nashada, waxa aanu ka hadlanay shaxdayadii 4-4-1 inaanu ka dhigno (kaddib casaankii Linglet), ciyaartoyduna shaqo wanaagsan ayay qabteen. Aad ayaan maanta ugu farxay kooxdan, si aad u wanaagsan ayaanu u shaqaynay iyadoo hal ciyaartoy naga maqan yahay.”